Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo wada qorshooyin aan raali galin doonin R/wasaaraha (Warbixin) - Wargeyska Faafiye
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo wada qorshooyin aan raali galin doonin R/wasaaraha (Warbixin)
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho kawadaan kulamo ay kaga soo horjeedaan Xukuumada cusub ee R/wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Xildhibaanadaani ayaa waxa ay qeyb ka yihiin kuwa ilaa iyo hada ka dhaga adeegaya inay taageeraan Xukuumada cusub waxa uuna kacdoonkooda suuragalin karaa in mar kale ay caqabad ku noqdaan Jiritaanka Xukuumada.
Waxa ay ku adeegayaan in weli uu tashwiish ku jiro Xukuumada cusub oo ay weli ka dhexmuuqdaan Xubno ka tirsan Dam-Jadiid oo horay u gudbiyay Codsiyadooda balse xiligaani ay fursada u saamaxday maadaama ay jiraan Caqabado xukuumada ka heysta dhanka Baarlamaanka.
Tani waxay culeys labaad ay ku keeni doontaa Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, oo horey ugu fashilmay in Baarlamaanku uu ka dhaadhiciyo inay codka siiyaan, Golihii Wasiirada ee uu soo magacaabay 12-kii bishaan.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsUN backs ruling on refugees.Afhayenkii hore ee Shabaab oo shalaynaya.WFP oo B/weyne ka furatay xafiis .Britain oo Danjire Cusub u Magacaawday Somalia.Dowladda oo la wareegtay Ceel-Macaan